Waqooyi Waqooyi-Galbeed: Dayac-tirka Dhulka ee Waqooyi-Galbeed iyo Waqooyiga Bartamaha Waqooyiga Minnesota
Hoos waxaa ka mid ah Madaxwayne ku xigeenka Barnaamijka Neal Cuthbert's ee ka yimid McKnight ee loo xilsaaray "Waqooyi Waqooyi-Galbeed: Dayac-tirka Dhulka ee Waqooyi-Galbeed iyo Waqooyiga Bartamaha Waqooyiga Minnesota, "Faahfaahin ka soo baxda Jay Walljasper fursado baadi-goobis ah iyo caqabado kudhisan Brainerd, Fegus Falls, iyo bulshooyin kale oo ku yaal waqooyi-galbeed ee Minnesota.
Dhammaanteen waxaan maqalnay sheegashooyinka soo socda ee ku saabsan Minnesota-yar:
Degmooyinka Minnesota waxay burburiyeen 50 sano oo ah "daadin maskaxeed." Magaalooyinka yaryar kuma sii socon karaan dhaqanka dhaqanka jiilalka soo socda. Kaliya shaqo-bixiyeyaasha waaweyn iyo maalgashiyada malaayiin-doolar ayaa saameyn ku yeelan kara
Hase yeeshe, midkoodna kama wada hadlin wararkaasi.
Dhab ahaantii, taniyo 1970-kii, dadka reer miyiga ah ee Minnesota waxay dhab ahaantii kor u kaceen boqolkiiba 11 - isbeddel ay ku socdaan in ay sii wadaan maaddaama ay carruur badani u guurayaan hawlgab. Fursadaha cusub ee laga soo bilaabo broadband ilaa brewpubs ayaa soo jiidanaya "xasilooni maskaxeed" ee farshaxanada iyo ganacsatada ah ee Brainerd iyo Fergus Falls. Jadwalka Wadooyinka iyo wadooyinka baaskiilka ee Alexandria ilaa Frazee ayaa soo jiidatay dareen qaran iyada oo hagaajinta tayada fudud ee nolosha ay heshay heer aad u sarreeya.
Kuwani waa qaar ka mid ah qoraallada yaryar ee magaalada Jay Walljasper oo ku saabsan "Waqooyi Waqooyi-Galbeed: Dayac-tirka Dhulka ee Waqooyi-Galbeed iyo Waqooyiga Bartamaha Waqooyiga Minnesota, "Qaybtii ugu dambaysay ee nooceeda ah Cuntada loogu talagalay taxanaha fekerka. Sannadkii hore, Hay'adda McKnight Foundation waxay Walljasper ku wareejisay Walljasper, oo ah hay'ad ku saabsan qorshaynta magaalooyinka iyo horumarinta bulshada, si ay u dhagaystaan dalxiiska dhagaxa woqooyiga Lake Wobegon, la hadlaya dadka deggan, hoggaamiyayaasha, iyo sharci-dajiyayaasha ku nool bulshooyinka baadiyaha ah ee waqooyi-galbeed iyo waqooyiga dhexe ee Minnesota.
Waddada oo dhan, wuxuu helaa kor u kaca soogalootiga cusub ee St. Cloud, waxana uu baranayaa dadaalka White Earth ee ah in uu dib u soo celiyo dhaqano dhaqameed oo soo celin kara rajada iyo caafimaadka wanaagsan Anishinaabeg Nation. Isagoo booqanaya saldhiga saliidda qorraxda ee Pierz, iyo in uu eego qorshooyinka xarun cusub oo farshaxan cusub oo lagu magacaabo Park Rapids 'oo ah qalabka taariikhiga ah, isaga oo diidaya inuu maqlo magaalada ka dib markii ay tahay in xalka ugu fiican ee bulshooyinka miyiga ahi ay ka soo koraan dhulka. Maadaama qorshaha Brainerd ee qorshaha degaanka iyo magaalada Charles Marohn uu kula taliyay: "Isku dheelitir sida loo sameeyo meel fiican oo loogu talagalay dadka halkan ku nool. Haddii aad sanadkaas sameyso sanadka, waxaad heli doontaa meel wanaagsan oo soo jiidata dadka iyo ganacsiga. "
Waa fariin aan maqalnay - oo aan wax ka sheegnay - at The McKnight Foundation tan iyo markii Virginia McKnight Binger, guddoomiyaha guddiga, iyo Russ Ewald, ka dibna madaxwaynaha, ayaa ku dhawaaqay in ay dhagaysteen dalxiiskooda sannadkii 1980-maadkii, iyagoo booqanaya jaaliyadaha baadiyaha ah dhibaatooyinka beeraha. Casharradii laga bartay kulannadan ayaa dhiirrigeliyay abuurista Aasaasiyadeedka Minnesota (MIFs), lix hay'ado oo kala duwan oo loogu talagalay in lagu muujiyo qiimaha iyo aragtida beelaha loo adeego iyaga oo ka dhigaya kuwo adkeynaya. Hadda oo loo dabaal-dagayo sannad-guuradii 30-aad, "MIF-ga" wuxuu awood u siiyey Hay'adda in ay maal-galiso in ka badan $ 285 milyan oo kuyaal dhulka miyiga ah ee gobolka, oo ah dadaal joogto ah oo gacan ka gaystay kordhinta $ 270 milyan oo dheeri ah si loo hirgeliyo fikradaha waawayn ee ku soo badanaya magaalada yar-yar ee Minnesota.
Waxaan rajeyneynaa in tani ay eegto magaalooyinka yar yar ee gobolkeena waxay soo bandhigaan muuqaal dhab ah iyo muuqaal cusub oo ku saabsan gobolka waqooyi-galbeed iyo waqooyiga dhexe.